Nhau - 2020 Wenzhou Goridhe Eagle Pump vharafu Exhibition / International Pump vharuvhu Exhibition / Sangana newe muOubei yongjia musi waGumiguru 23
Yegumi nemashanu Wenzhou (Golden Eagle) Pump vharafu Exhibition / vharafu Exhibition / pombi vharafu Exhibition / International pombi vharafu Exhibition / pombi kambani / vharafu chigadzirwa mugadziri / ichaitirwa muWenzhou Yongjia Oubei Tsika uye Nhandare Yemitambo kubva Gumiguru 23-25, 2020!
The 15th Wenzhou (Golden Eagle) Pump vharafu Exhibition rave upgraded maererano chikero, yepamusoro uye rinobva mabasa, pamwe 650 matumba uye anofungidzirwa inoratidzirwa nzvimbo zviuru 20,000 mativi mamita. Ramba uchisimbisa vateereri vekunze uye Germany, Italy, Korea, Singapore, India, Vietnam nevamwe vatengi vekunze vanoronga vakakokwa, uye vekupedzisira-vashandisi indasitiri musangano vachakokwa kuchiratidziro chakazara chepombi vharuvhu, zvigadzirwa zvepombi, senge tekinoroji yazvino uye zvigadzirwa, munda wepombi vharuvhu indasitiri kuti upe zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, hunyanzvi hwazvino uye mhinduro.
PVPEW 15th Wenzhou (Golden Eagle) pombi vharuvhu Exhibition iri mudzimba nyanzvi pombi vharafu kuratidza, rave nyanzvi chiitiko kuti nyanzvi kumba uye kunze havagoni kupotsa.
Sezvo wenzhou Jinying Media Co, LTD. Yakaitwa nyanzvi pombi vharuvhu inoratidzira muna 2004, simba rayo rave kuwedzera uye zviyero zvaro zvave zvichikurawo, uye chave chimwe chezviitiko zvakakosha muindasitiri. Chiratidziro chinonzwisisika chinoratidza simba repombi yeChina neyevharuvhu, kunyanya "guta rekumusha kwepombi yeChina nevhavha"; Uyezve kuwedzera maonero uye simba Wenzhou pombi uye vharafu indasitiri kumba uye kunze; Taura matarenda ekunze epamberi, tekinoroji, manejimendi uye mari yekuvandudza nekushandura echinyakare maindasitiri, kusimudzira kukwidziridzwa uye kusimudzira kwemaindasitiri mamiriro, uyezve kusimudzira kukwikwidza kwemabhizinesi; Kuwedzera kuwedzera wenzhou pombi vharuvhu indasitiri yekunze kutengeserana kutengesa, kuwedzera mari yekunze; Izvo zvine hukuru hwenhoroondo uye hunoshanda kukosha kuenderera mberi nekusimudzira kuenderera, kukurumidza uye kugonesa kukura kweYongjia, Wenzhou uye kunyangwe China pombi uye vharuvhu indasitiri.
Pashure pemakore budiriro, Wenzhou pombi uye vharafu indasitiri zvino ane mabhizimisi zvinopfuura 3,110, kusanganisira 523 emakambani pamwe wepagore goho ukoshi anopfuura mamiriyoni 20 Currencykuva. Kune makumi manomwe neshanu-tech emakambani emhando dzakasiyana. Nzvimbo dzemabhizimusi ekubatanidza dzinowanikwa muOubei, Longwan neRuian. Mu2019, iyo yakazara maindasitiri anoburitsa kukosha kweiyo indasitiri yese yakasvika anopfuura makumi mashanu emamiriyoni euan, iine gore-gore-gore kukura kwe9%.